'' အသားသတျလှတျ စားနသေူမြား ကနျြးမာရေးလညျး ညီညှတျစေ အာဟာရလညျး ပွညျ့ဝစရေနျ ဘာတှေ စားမလဲ '' - SANTHITSA
မိတျဆှတေို့အနနေဲ့ အသားငါးတှကေို အဓိဌာနျပွုပွီး လှူဒါနျးလိုကျတာဖွဈစေ မစားသုံးခငျြတော့တာမြိုးပဲဖွဈစေ အသားသတျလှတျ စားသုံးခွငျးကို ပွုလုပျတော့မယျ ဆိုပါက မိမိတို့ကိုယျ မိမိတို့ ကနျြးမာရေးနဲ့လညျး ကိုကျညီ အာဟာရလညျး မယုတျလြှော့ရလအေောငျတော့ အထူးသတိပွုဖို့ လိုပါတယျ။
ဒါဆို သငျတို့အနနေဲ့ အသားသတျလှတျ စားသုံးခွငျးမှာ ဘယျလို အစားအစာတှနေဲ့ အာဟာရ ကနျြးမာရေးကို ရမလညျး ဆိုတာကို သိရှိဖို့ဖွငျ့ လိုအပျလာပွီပေါ့… အဓိကအားဖွငျ့ ပွောရမယျဆိုရငျ သငျဟာ အသားကို ရှောငျထားတဲ့ အတှကျ ပရိုတငျးဓာတျ ပွနျလညျ ဖွညျ့စှကျဖို့တော့ လိုအပျပွီဆိုတာ သိထားပါ။
ပရိုတငျးဓာတျ ရဖို့ဆိုရငျ ဘာတှကေို ဖွညျ့သှငျးစာရငျးမှာ ထညျ့မှာလညျး….
၁ – တို့ဟူး
၂ – အစိမျးရောငျ ပနျးဂျေါဖီ
၃ – ပဲအမြိုးမြိုး
၄ – ဆနျလုံးညို
၅ – ဘရိုကိုလီ
၆ – နို့နှငျ့ နို့ထှကျ အစားအစာ။ စတဲ့ အစားအစာတှကေတော့ အသားနဲ့ ကွကျဥတို့ကနေ ပေးနိုငျတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျ မရတော့မဲ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျကို ဖွညျ့စှကျပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျသငျ့ကို အသားသတျလှတျစားတဲ့ အခြိနျမှာ လိုအပျနတေဲ့ အာဟာရဖွညျ့ပေး နိုငျမဲ့ အရာတှကေတော့….
_ ဗီတာမငျ ၁၂
_ အိုမီဂါ ၃ ဖကျတီးအကျစဈ
_ ဗီတာမငျ ဒီ စီ နဲ့ သံဓာတျ
_ ကယျလျဆီယမျနဲ့ သှပျဓာတျ စတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။
ကယျလျဆီယမျနဲ့ သှပျဓာတျ ရရှိဖို့ကတော့… ပဲနို့၊ အုတျစပါးနဲ့ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေနေ ရရှိနိုငျပွီး သှပျဓာတျကိုတော့ ပဲအမြိုးမြိုးနဲ့ အစအေ့ဆနျအမြိုးမြိုးကနေ ရရှိနိုငျပါတယျ။
ဗီတာမငျ ဒီ ၊ စီနဲ့ သံဓာတျတှကေိုတော့… ဗီတာမငျ ဒီကို လိမ်မျော ရညျ၊ မှုိ၊ ပဲနို့နဲ့ ဟငျးနုနှယျတို့ကနေ ရရှိနိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျစီနဲ့ သံဓာတျကိုတော့…. ငှကျပြောသီး၊ ဟငျးနုနှယျ၊ အခဉျြအရသာရှိတဲ့ သဈသီးမြား စတာတှကေနေ ရရှိနိုငျပါတယျ။
သားသတျလှတျ စားသုံးသူတှအေတှကျ သံဓာတျဟာ ပုံမှနျထကျ နှဈဆရရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အဆီပေါကွှယျဝတဲ့ အစားအစာတှကေတော့….. အစအေ့ဆနျနဲ့ သဈသီးတှမှော မပွညျ့ဝဆီတှေ မြားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ သံလှငျဆီ၊ နကွောဆီ နကွောစေ့ ၊သဈကွားသီး ၊ ထောပတျသီး ၊ဗာဒံစေ့ စတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဗီတာမငျဘီ12 က သငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ မရှိမဖွဈကို လိုအပျပါတယျ။ သူကတော့ အာရုံကွောစနဈကို ကောငျးမှနျစပွေီး ဦးနှောကျရဲ့ လုပျငနျးတှကေို ကောငျးမှနျစတောမို့ ဖွဈပါတယျ။ သှေးနဲ့ DNA ထုတျလုပျမှုကိုလညျး အထောကျအကူ ပွုတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပဲနို့၊ ကှကောနဲ့ တစေးလို အစားအစာမြိုးမှာ ပါဝငျပါတယျ။ ဗီတာမငျ ၁၂ ဟာ သားသတျလှတျအစားအစာတှမှော ပါဝငျမှု နညျးပါးတာကွောငျ့ မဖွဈမနေ ဗီတာမငျ ၁၂ ပါဝငျတဲ့ ဆေးဝါးကို မှီဝဲပေးသငျ့တယျလို့ ဆေးပညာအရ ဆိုထားပါတယျ။
အိုမီဂါသရီး ဖကျတီးအကျစဈတှကေိုတော့ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ သဈကွားသီး ၊ဂုံလြှျောစလေို့ အစားအစာမြိုးတှမှော ပါဝငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သငျသားသတျလှတျ စားသုံးတဲ့အခါ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျပွီး အာဟာရခြို့တဲ့မှုလညျး မရှိရလအေောငျ ဖျောပွပါ အစားအစာမြားနဲ့ ဗီတာမငျမြားကို ပါဝငျအောငျ စားသုံးပေးပါ။
သငျ့ကနျြးမာရေးကို ပိုမိုကောငျးမှနျ တိုးတကျစဖေို့ အဟာရပွညျ့မဲ့ အစားအစာတှေ စားကွစို့လို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။
” အသားသတ်လွတ် စားနေသူများ ကျန်းမာရေးလည်း ညီညွတ်စေ အာဟာရလည်း ပြည့်ဝစေရန် ဘာတွေ စားမလဲ ”
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အသားငါးတွေကို အဓိဌာန်ပြုပြီး လှူဒါန်းလိုက်တာဖြစ်စေ မစားသုံးချင်တော့တာမျိုးပဲဖြစ်စေ အသားသတ်လွတ် စားသုံးခြင်းကို ပြုလုပ်တော့မယ် ဆိုပါက မိမိတို့ကိုယ် မိမိတို့ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ကိုက်ညီ အာဟာရလည်း မယုတ်လျှော့ရလေအောင်တော့ အထူးသတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါဆို သင်တို့အနေနဲ့ အသားသတ်လွတ် စားသုံးခြင်းမှာ ဘယ်လို အစားအစာတွေနဲ့ အာဟာရ ကျန်းမာရေးကို ရမလည်း ဆိုတာကို သိရှိဖို့ဖြင့် လိုအပ်လာပြီပေါ့… အဓိကအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အသားကို ရှောင်ထားတဲ့ အတွက် ပရိုတင်းဓာတ် ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ဖို့တော့ လိုအပ်ပြီဆိုတာ သိထားပါ။
ပရိုတင်းဓာတ် ရဖို့ဆိုရင် ဘာတွေကို ဖြည့်သွင်းစာရင်းမှာ ထည့်မှာလည်း….
၁ – တို့ဟူး
၂ – အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီ
၃ – ပဲအမျိုးမျိုး
၄ – ဆန်လုံးညို
၅ – ဘရိုကိုလီ
၆ – နို့နှင့် နို့ထွက် အစားအစာ။ စတဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အသားနဲ့ ကြက်ဥတို့ကနေ ပေးနိုင်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် မရတော့မဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်သင့်ကို အသားသတ်လွတ်စားတဲ့ အချိန်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ အာဟာရဖြည့်ပေး နိုင်မဲ့ အရာတွေကတော့….
_ ဗီတာမင် ၁၂
_ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ်
_ ဗီတာမင် ဒီ စီ နဲ့ သံဓာတ်
_ ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ သွပ်ဓာတ် စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ သွပ်ဓာတ် ရရှိဖို့ကတော့… ပဲနို့၊ အုတ်စပါးနဲ့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကနေ ရရှိနိုင်ပြီး သွပ်ဓာတ်ကိုတော့ ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ အစေ့အဆန်အမျိုးမျိုးကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် ဒီ ၊ စီနဲ့ သံဓာတ်တွေကိုတော့… ဗီတာမင် ဒီကို လိမ္မော် ရည်၊ မှုိ၊ ပဲနို့နဲ့ ဟင်းနုနွယ်တို့ကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီနဲ့ သံဓာတ်ကိုတော့…. ငှက်ပျောသီး၊ ဟင်းနုနွယ်၊ အချဉ်အရသာရှိတဲ့ သစ်သီးများ စတာတွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သားသတ်လွတ် စားသုံးသူတွေအတွက် သံဓာတ်ဟာ ပုံမှန်ထက် နှစ်ဆရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဆီပေါကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကတော့….. အစေ့အဆန်နဲ့ သစ်သီးတွေမှာ မပြည့်ဝဆီတွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီ၊ နေကြာဆီ နေကြာစေ့ ၊သစ်ကြားသီး ၊ ထောပတ်သီး ၊ဗာဒံစေ့ စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်ဘီ12 က သင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ သူကတော့ အာရုံကြောစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ကောင်းမွန်စေတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးနဲ့ DNA ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း အထောက်အကူ ပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပဲနို့၊ ကွေကာနဲ့ တစေးလို အစားအစာမျိုးမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ၁၂ ဟာ သားသတ်လွတ်အစားအစာတွေမှာ ပါဝင်မှု နည်းပါးတာကြောင့် မဖြစ်မနေ ဗီတာမင် ၁၂ ပါဝင်တဲ့ ဆေးဝါးကို မှီဝဲပေးသင့်တယ်လို့ ဆေးပညာအရ ဆိုထားပါတယ်။
အိုမီဂါသရီး ဖက်တီးအက်စစ်တွေကိုတော့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်ကြားသီး ၊ဂုံလျှော်စေ့လို အစားအစာမျိုးတွေမှာ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သင်သားသတ်လွတ် စားသုံးတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး အာဟာရချို့တဲ့မှုလည်း မရှိရလေအောင် ဖော်ပြပါ အစားအစာများနဲ့ ဗီတာမင်များကို ပါဝင်အောင် စားသုံးပေးပါ။
သင့်ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန် တိုးတက်စေဖို့ အဟာရပြည့်မဲ့ အစားအစာတွေ စားကြစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
#စန္ဒီမြင့်မိုရ်, photo: greenwaymyanmar